Baadiyow: Dadka Isugu Tagay Shirkii ONLF ee Sweden Waxaa u Badnaa Reer Soomaaliya oo Dano ka Leh Deegaanka Oslo, – Rasaasa News
Aug 5, 2010 Jubaland, Kismayo
Wareysi uu siiyey gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland ee Norway, mudane Cabdi Mahad Xuseen (Baadiyow), warsidaha Waamonews, ayuu ku sheegay in dadka faraha badan ee ka qeybgalay shirkii ururka ONLF, garabka aanan nabadda qaadan ee Sweden, inay ahaayeen dad reer Soomaaliya ah oo dano qaas ah kaleh siyaasadda deegaanka Soomaalida.
“…Soomaalidii marki horeba inaga Itoobiya naga-iibsanjirtay ayaa waxey u diyaargaroobeen in wixii….problem ku sameyn kara Soomaali Galbeed inay iyagana dhinaca kale la qabtaan,” ayuu ku yiri mudane Baadiyow qeybta labaad ee wareysiga hoose.
Dhanka kale, gudoomiyaha ayaa ugu hambalyeeyey dowladda Itoobiya iyo ururka UWSLF hashiiskii dhawaan ay ku kala saxiixdeen magaallada Addis Ababa.
Shacabka Jubbooyinka ayey wada-dhalasho gaar ah ka dhaxeysaa kuwa deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxeyna ku jiraan abaabul ay kaga hortagayaan kooxda al-Shabaab, islamarkaana ay ku dhisanayaan maamul gobolleed u gooni ah. Isku-dayga dadaalkan ayaa meelmari doona haddii lagu hogaamiyo siyaasad furfuran, taasoo muujineysa daris wanaag, xoojinta nabadgalyada iyo wada-shaqeynta dalalka dariska ah.
Hoos ka daawo wareysiga mudane Baadiyow.